Ekoatora: Tsy Handoa Ny trosa Ivelany Intsony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2018 7:00 GMT
Tsy ela akory izay, nambaran'ny filoha ekoatoriàna Rafael Correa fa tsy handoa ny ambin-trosany ivelany intsony ny fireneny. Tamin'ny fitanisàna ny krizy ara-toekarena, nokilasian'i Correa ho trosa «tsy mifanaraka amin'ny maoraly sy tsy ara-drariny» izy ireny, maneho ny fahatsapan'ireo olompirenena tsotra ekoatoriàna milaza fa tsy afaka ny handoa intsony ry zareo. Efa nandoa zanabola 2,45 lavitrisa dolara i Ekoatora, araka izay voalaza ao anatin'ny andraikiny iraisampirenena. Miditra anaty kajikajy daholo na izay singa kely indrindra aza ao anatinà toekarena iray mitsingilahila ahitàna fitontonganan'ny vidin-tsolika, niala tamin'ny 140 dolara ny iray barika ka tonga amin'ny 45 dolara tamin'ny faran'ny herinandro, firenena izay nihena ihany koa ny vola alefan'ireo mpila ravinahitra ary nahatratra 3,2 lavitrisa dolara ny tsy fahampian'ny tetibola ho an'ny taona 2009 (esp). Ireo avy no singa mahatonga io fanapahankevitra io. Ny fandàvana tsy handoa ilay trosa dia hahafahan'ny fanjakàna mandany misimisy kokoa ho an'ny fandaharanasa sôsialy.
Noraisin'i Rafael Correa ny fanapahankevitra tsy hanatanteraka ny andraikiny iraisampirenena ( 2012, 2015 sy 2030) taorian'ny fanolorana ny tatitra ofisialy farany nataon'ny Kaomisiôna Fitsirihana ny Volam-Bahoaka (Comision para la Auditoria Integral del Crédito Público, na CAIC (esp), fitsirihana iray mikasika ny trosa ivelany baben'i Ekoatora. Fanindroany tao anatin'ny folo taona ilay fanapahankevitr'i Ekoatora hampitsahatra ny fandoavany ny zanabola avy amin'ny trosam-pireneny, tamin'ny 1999 ny voalohany, fony izy tsy nety nandoa ny 10 lavitrisa dolara. Ny 2008, tafakatra 3,9 lavitrisa dolara io vola io.
Ny Filohan'i Ekoatora manambara amin'ny fomba ofisialy fa tsy handoa ny zanabola voafaritry ny andraikiny ho an'ny taona 2012. Sary nampiasàna ny lisansa Creative Commons, an'ny Presidencia de la República del Ecuador.
Io kaomisiôna io izay ahitàna mpahay toekarena, mpahay lalàna ary solontenan'ireo fikambanana sôsialy ao Ekoatora sy firenena hafa, no nanomana io tatitra io, izay mampiseho ny tsy fitoviana sy ny maha-tsy an-drariny ny zotra nanaovana ilay fampitrosàna. Vava-ady roa no atrehan'i Correa, mpahay toekarena niofana tany Etazonia, ny governemantany niantso mpisolovava roa avy any New York (Foley Hoag sy Paul Reichier) mba hanolo-tsaina io firenena latino-amerikàna io momba ny zo iraisampirenena. Ho ampiroboroboin'i Correa ihany koa ny fananganana ny Tribonaly Iraisampirenena Fanelanelanana Momba ny Trosam-panjakana ao amin'ny Firenena Mikambana, izay handray anjara amin'ny fanavaozana ny rafitra ara-bola iraisampirenena.
Maneho ny ahiahiny momba io olana io ireo bilaogera. Asehon-dry zareo ny fankasitrahany ny asa vitan'ny CAIC, saingy ny sasany, toa ny Ecuador Sin Censura (esp) dia manoratra fa tsaratsara kokoa ho an'ny firenena raha toa ilay kaomisiôna ka miasa tsy miankina amin'ny fanjakàna, indrindra indrindra fa ny iray amin'ireo mpikambana ao aminy dia tsy iza fa ilay mpiovaova palitao Ricardo Patiño, minisitry fahiny nisahana ny fitantanambola teo ambany fitondran'i Correa.
La Alharaca (esp) dia maneho fangorahana ho an'ireo mahantra, izay tsy mahatakatra na inona na inona momba izay ho vokatry ny fanapahankevitry ny filohany. Hamafisiny fa marobe ireo tsy mahafantatra ny antony mahatonga ire banky tsy maintsy mampandoa zanabola avobe, satria tsy mahazo famatsiambola iraisampirenena ry zareo ary ireo indostria kely ao Ekoatora dia hanjavona satria tsy hisy na iray aza mpamatsy ao an-toerana hiditra hampitrosa indostria iray ao anaty firenena iray izay ny filohany dia nilaza fa tsy ara-dalàna ny fanondrotana ny tahan-janabola nataon'ireo mpampindrana.
Mampisalasala ireo Ekoatoriàna, ary na ireo mpanao gazety manana ny maha-izy azy aza, ny fahamarinan'izay voalaza ao anatin'ilay tatitra. Ho an'ireo mpianany, ilay profesora mpampianatra momba ny toekarena, Pablo Lucio Paredes, izay manoratra isanandro fandalinana ho an'ny gazety El Universo, no mpitaridàlana iray tena lafatra amin'io sehatra io, ary na izy aza dia nanontany tena. Manontany ilay fandalinany hoe : «Misy fahamarinana ve ?», ary izy ihany no mamaly : «Angamba». Tsaroan'ny mpianany iray, lasa bilaogera ankehitriny, ny iray tamin'ireo fampianarany momba ny fitantanambola tany amin'ny anjerimanontolo, ary manoratra momba ny fandalinana tranga naroson'ny Paredes tao anatinà toetoe-javatra mitovy amin'izay ihany, saingy amin'ny fieritreretana hoe ireo mpianatra no mpitantana orinasa iray tsy miankina.
Eken'ilay mpanoratry ny Cambiemos Ecuador (esp) fa i Ekoatora, amin'ny maha-fandraharahàna iray azy, dia ratsy fitantanana vokatr'ireo fanararaotan'ireo mpitondra teo aloha, ireo fifampiraharahàna tsy nahomby nifanaovana tamin'ireo mpamatsy teo an-toerana, ireo fandaniana tsy mazava, sy ny sisa tsy voatanisa. Saingy, hoy izy manipika, «ho anà orinasa iray, tsy zavatra ratsy akory ny fahazoana fampindramambola, ny ratsy dia ny tsy fampiasàna izany vola izany ho aminà asa miteraka tombony ho an'ny vola miditra amin'ny fanjakàna» ary manoro hevitra izy : «ireo findramambola hanaovana tohodrano, seranana ary làlana dia mamatsy tena ary mamorona harena, ireo izay ampiasaina ho amin'ny fandaniambolam-panjakàna no mandetika antsika bebe kokoa.»
Kanefa, ny hafa manontany tena momba izay làlana izoran'i Ekoatora amin'izao fotoana izao. Manoratra ny La Hueca (esp) :
Isak'izay mihetsika, miha-manatona tsikelikely ny tay isika. Fanirian'Andriamanitra ny hanilo saina ny filohantsika mba hahitany ny marina – izay mampisalasala ahy – nefa iza moa no mahalala.
Fehiny, ireo olontsotra Ekoatoriàna, izay angamba tsy mahatakatra ny voambolana miasa amin'ity adihevitra ity, mety hampitaha ny fiainany manokana amin'ilay olan'ny trosa aloa amin'ireo banky. Raha manaraka làlan-tsaina mitovy ry zareo, tsy tokony koa ve izy ireo hanatsahatra ny fandoavany ny trosany nifanaovany manokana tamin'ny banky ?
15 ora izayVenezoela